Anastrozole poda (120511-73-1) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Anastrozole inoshandiswa kurapa kenza yemazamu muvakadzi mushure mokunge apera. Mimwe mishonga yemazamu inogadzirwa kuti ikure nokukurumidza nehomoni yakasikwa inonzi estrogen. Anastrozole inoderedza uwandu hwewesrogen muviri unogadzira uye unobatsira kuderedza kana kuchinja kuwedzera kweaikenza yemazamu.
Raw Anastrozole powder (120511-73-1) Tsanangudzo
Raw Anastrozole powder, zita rainzi Arimidex. Inoshandiswa nedzimwe mishonga, zvakadai sokuvhiya kana kupiswa kwemhepo, kubata chirwere chepachibereko chekutanga munguva yevakadzi vakambosvika kumwedzi (kuchinja kwehupenyu; kuguma kwemwedzi yekuenda kumwedzi). Iyi mishonga inoshandiswa zvakare kuvakadzi, avo vakambosangana nekuguma, sekutanga kurapwa kwekenza yebonde yakapararira mukati memvere kana kune dzimwe nzvimbo dzomuviri. Iyi mishonga inoshandiswawo kubata chirwere chepabonde kuvakadzi vane kenza yemazamu yakawedzera kukurumidza pashure pokutora tamoxifen (Nolvadex). Raw Anastrozole powder iri mukirasi yemishonga inonzi nonsteroidal aromatase inhibitors. Inoshanda kuburikidza nekuderedza chiyero che estrogen muviri unoita. Izvi zvinogona kunonoka kana kumira kukura kwemarudzi akawanda emasero emumabere echeche anoda estrogen kukura.
Raw Anastrozole powder yakasimba uye yakasarudzwa isiri-steroidal aromatase inhibitor yakaratidza kuporesa kwekenza yepamusoro yepamuviri mumashure-varume vaneopausal vane hutachiona hwechirwere mushure me tamoxifen therapy. Mishonga yakawanda yemazamu ine anrogen receptors uye kukura kwezviremara izvi zvinogona kukurudzirwa neverrogens. Mumashure madzimai anopaopausal, mutungamiriri mukuru wekutenderera estrogen (kunyanya isradiol) ndiko kushandurwa kweadrenally-generated androstenedione kune estrone ne aromatase mumativi ehutachiona, akadai seadipose tissue, pamwe nekushandurwa kwe estrone ku estradiol. Mishonga yakawanda yemazamu inewo aromatase; kukosha kwe-tumor-yakagadzirwa estrogens haina chokwadi. Kurapa kwekenza yemazamu kwakabatanidza miitiro yekuderedza maitiro eesrogen ne ovariectomy premenopausally uye nekushandiswa kwe-anti-estrogens uye progesational agents zvose zvisati zvaitika uye shure-menopausally, uye izvi zvinotungamirira kukudzikisa chiremera chikuru kana kunonoka kuenderera mberi kwechirwere kukura mune vamwe vakadzi. Raw Anastrozole powder yakanyanyisa uye yakasarudzwa kwete-steroidal aromatase inhibitor. Iyo inonyanya kuderedza serum estradiol uye haigoni kuonekwa pakugadzira adrenal corticosteroids kana aldosterone.
Kemikari Name ICI-D-1033;ARIMIDEX;1-[3,5-DI-(1-METHYL-1-CYANO)-ETHYL]-BENZYL-1,2,4-TRIAZOLE, Anastrozol
muchiso Name Arimidex
Kirasi yeMishonga kwete-steroidal aromatase inhibitor
Molecular Wsere 293.374 g / mol
Kunyorera Point 130.14 ° C
Biological Half-Life 50 maawa
Solubility mvura inogadziriswa 0.5 mg / mL
chengetedzo Temperature RT
APane Pamushonga weAdjuvant weHymmone receptor positive kansa yepamu, uyewo mahomoni ekurapwa kwekenza yepamusoro mune zvema-menopausal vakadzi. Yakashandiswawo kubata pubertal gynecomastia uye McCune-Albright chirwere.
Chii chinonzi Raw Anastrozole powder (120511-73-1)?
Anastrozole inonzi nonsteroidal inhibitor yearomatase inonyatsodzivirira isrogen synthesis mumashureopausal vakadzi uye inoshandiswa seyrapi yeestrogen receptor positive kanzvadzi yepamu. Anastrozole yave ichibatanidza nehuwandu hwehutachiona hwemamiriyoni emukondomu panguva yekurapa uye zvisingawanzoitiki zvechipatara zvinokuvadzwa nechiropa.
Iyo Yakakura Anastrozole powder (120511-73-1) mabasa
Anastrozole inoshanda kuburikidza nekuderedza kuwanda kweserogen yakaitwa mumuviri.
Mimwe mishonga yekenza inokurudzirwa kukura nehomoni isrogen. Aya anozivikanwa seestrogen receptor positive kana ER + mazamu emukenza.
Anastrozole ndeyeboka rezvinodhaka rinonzi aromatase inhibitors.
Chirwere che ARIMIDEX ndechimwe 1 mg tablet yakatorwa kamwe pazuva. Kune varwere vane kenza yepamusoro yepabonde, ARIMIDEX inofanira kuenderera mberi kusvika pakukura kwemarara. ARIMIDEX inogona kutorwa kana kuti isina kudya.
Kukurapa kweAdjuvant yekenza yepamberi yepamuviri mukati mevakadzi veimenopaususal, nguva yakakwana yekurapa haina kuzivikanwa. Mumutambo weAATAC, ARIMIDEX yaitungamirirwa kwemakore mashanu.
Hapana kuchinja kweiyo kudiwa kunodiwa kune varwere vane kuora mwoyo kwechirwere kana kuvakwegura vakwegura.
Raw Anastrozole powder (120511-73-1) zvinobatsira
Kuongorora kweAATAC kwakawana kuti makore eAXMUMX eArimidx ari nani kupfuura makore e5 e tamoxifen sechirwere chekutanga chemahomoni kune vakadzi vepommenopausal vane chirwere chekare, hormone-receptor-positive. Arimidex ari nani kupfuura tamoxifen ye:
Tenga Anastrozole powder (120511-73-1) kubva kuBuasas.com